I-20L yoBhiya oMbane (ubungakanani besiko obufumanekayo) -News-NingBo COFF Machinery Co., ltd
20L Brewing (ubukhulu besiko obukhoyo)
Ixesha: 2020-12-09 I ngxelo: 67
Izixhobo eziluncedo: I-Skid inyuswe, ijongeka intle, iplagi kunye nokudlala, olona khetho lufanelekileyo ekuphekeni kwasekhaya nakwisifundo sokuqhuba. Ixabiso eliphantsi. Ubungakanani: 1100 (L) x 630 (W) x 1000mm (H)
Uqwalaselo lwesahlulo sesahlulo: Ipleyiti yokugaya, ubukhulu beplate ye-4 mm, umngxunya ongaphezulu, iintonga zokufudumeza zombane ezakhelwe-ngaphakathi, i-RTD- isivamvo sobushushu se-PT100, umbhobho wentsimbi engenazintsimbi, isinyithi ibhabhathane yentsimbi, ithemometha, impompo, ukuxubana ngesandla kunye nekhuba imela, i-SS304, i-2 mm, (i-oyile yefilimu yokuzoba) iqhosha lokulawula iqhosha, i-stainless steel Heat exchanger nge-wort aeration nge-wort oxygenation assembly, i-Heat exchanger, i-filters, izixhobo, izinto ezingenasici ezingenasici, i-Sparge ring kunye ne-sprayers, ukucwangciswa, amanzi ashushu ahlambe isixhobo esibi, Ukuhlamba.
Uninzi lwezinto zokuthengisa utywala ziqala ishishini lazo kwiinkqubo ze-nano. I-COFF sele izinikele ekunikezeleni isisombululo esisesikweni esipheleleyo kuyilo, ukwenziwa, ukufakelwa kwinkonzo yasemva kwexesha. Nge-COFF, uqinisekile ukonyusa ixabiso lakho.
Ngolwazi oluthe kratya, qhagamshelana ne-pls kakuhle@nbcoff.com
Previous: Umjelo weCOFF weVidiyo
Okulandelayo: Uyilo lweOnline